ဘ၀ပေး မျက်နှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ဘ၀ပေး မျက်နှာ	21
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 11, 2015 in Photography | 21 comments
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မတူညီသော ဘ၀ တွေရှိကြပါတယ်။
ဘ၀ ခြင်း မတူ ရင် မျက်နှာပေးတွေလဲ မတူနိုင်ပါဘူး
အခုဒီပုံထဲမှာတော့ ကလေးတွေ ရဲ့ ဘ၀ မတူ တဲ့ အတွက်
သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်အလိုက် မျက်နှာပေးတွေလဲပြောင်းသွားတာအမှန်ပါဘဲ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မြန်မာပြည်နဲ့တရုပ်ပြည်နယ်စပ် မြို့ဖြစ်တဲ့ ကျယ်ခေါင်မြို့မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ ပေးမျက်နှာလေးတွေပါ။
Ma Ma says: ပထမပုံက ကလေးလေးတွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး နှောင်ဖွဲ့ထားသလို ခံစားရတယ်။
ဒုတိယပုံက ကလေးလေးကတော့ လုံခြုံမှုတွေနဲ့ ပြည့်ဝနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
uncle gyi says: အားငယ်မှု နဲ့ ပျော်ရွှင်မှု
နှောင်ဖွဲ့မှု နဲ့ လွတ်လပ်မှု
မလုံခြုံမှု နဲ့ လုံခြုံမှု
. ပြည်မကြီး က ပြန်ရောက်လာပြီလား။
အမာခံ တစ်ယောက်ပြန်ပေါ်လာလို့ ဝမ်းသာလှပါဘိ။
အတွေ့အကြုံ သစ်တွေရော၊ ဆယ်ကျော်သက်လွန် ပလက်ဖောင်းနံပါတ် များ ကိုရော မျှော်နေပါတယ် ရှင့်။
အဲဒီ လို ပြည်နယ် တွေ က ကလေး တွေ ရဲ့လူနေမှု ပုံက ပိုပြီး သပ်ရပ် သန့်ပြန့် သလို လို့ ထင်နေမိတာ။
ပုံ(၁) က ကလေး တွေ မှာ မေတ္တာငတ်နေသလိုမျိုး အကြည့်တွေလို့လဲ ထင်မိတယ်။
ဂျစ်ကန်ကန် မျက်နှာ လေးတွေ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရဲ့ ဘဝပေး မျက်နှာ တွေ ကို ပြန်လှည့်ကြည့်တော့
ဘဝ ကြမ်းကြမ်း တွေ ကို လျှောက်ပြီး လိုက်ချိန်မှာ
ငယ်တုန်း က “မာန မျက်နှာ” ကွာသွားတာကို အသေအချာ တွေ့ရပါ့။
Mike says: .ပျောက်နေတာကြာပါပကော
.ကလေးတွေမျက်နှာက သဘာဝအတိုင်းမို့ ခံစားမှုလေးတွေဖတ်လို့ရတယ်
အောင် မိုးသူ says: ဝမ်းသာ ၊ ဝမ်းနည်း
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မမရေ
အဲဒီကလေးတွေက တရုပ်ပြည်အ၀င်တံခါးဝ နန်းတော်ပေါက်မှာ နေတဲ့ကလေးတွေပါ။
နောက်တစ်ပုံက ကလေးကတော့ ကျယ်ခေါင်ထဲက ကလေးလေးပါ။
တစ်နေ့ထဲ တစ်ချိန်ထဲ တစ်နေရာထဲမှာ ရိုက်လာတဲ့ ပုံလေးပါ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: မျက်နှာလေးတွေမာလိုက်တာ….
စိန့်ပြည်က… ကလေးတွေက..တကယ်က.. တဦးတည်းသမား..သားတွေများတယ်..။
၁၉၈၀ ကအဲဒီ One-Child Policy စခဲ့တာမို့.. အဲဒီကလေးတွေကြီးလာပြီးအခု..တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကနေရာတွေမှာရောက်ရှိ.. မောင်းနှင်နေကြပြီလေ…
အဲဒဲကြောင့်… စိန့်တိုင်းသားတွေစီးပွားရေးလုပ်ရင်.. တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်..။
အတ္တကြီးတယ်…။ .. … …
ဒီမျက်နှာမာမာကလေးတွေနဲ့တော့… မြန်မာပြည်အနာဂတ်.. ရင်လေးစရာ…။
No siblings: A side-effect of China’s one-child policy
One-Child Policy Is One Big Problem for China
By Susan Scutti / January 23, 2014 8:47 PM EST
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုခိုင်ရေ မာကျောကျော မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးတွေက မြန်မာပြည်ဘက်ခြမ်းမှာနေတဲ့
padonmar says: တရုတ်ပြည်နန်းတော်တံခါးဝက ကလေးတွေက သနပ်ခါးပါးကွက်နဲ့ ဆိုတော့ အံ့သြမိတယ် ကိုပေါက်ရေ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မပဒုမ္မာရေ
အဲဒီကလေးတွေ က မြန်မာဘက် အပိုင်းက ကလေးတွေပါ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: uncle gyi ရေ
တည်ငြိမ်သောစီးပွားရေး နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ရှိတဲ့ နိုင်ငံက
လူတန်းစား ကွားခြားချက် ကျဉ်းမြောင်းပါတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုလတ်ကြီးရေ
ပလက်ဖောင်းများကတော့ ဆက်ရေးဘို့ အားမွေးအုံးမယ်
နာမယ်ကတော့ ခြေတစ်လှမ်းအကွာက သူတို့ နေရာ လို့ ပေးထားပါတယ်။
နောက်ဓါတ်ပုံတွေက တော့ တစ်ပုံ တစ်ပင် အများ ကြီးရှိပါရဲ့
ကလေးတွေခြင်းတူပေမယ့် ဘ၀ပေးအခြေ မတူသူတွေပေါ့
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: Mike
ပျောက်တာ ကြာဆို ၀င်မရတဲ့နေရာမှာအကြာကြီး
အခုရက်ပိုင်းကတော့ ဘ၀ ပုံတွေကို ဘဲ စိတ်ဝင်စားပြီးရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းပေါ်ကလူတွေရဲ့ ဘ၀အများကြီး ရိုက်လာခဲ့တယ်လေ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုအောင်မိုးသူရေ
Alinsett @ Maung Thura says: ပထမ ပုံလေးထဲက ကလေးတွေကို…အကြာကြီး… ပြန် စိုက်ကြည့်မိသွားတယ်…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တကယ့် သမ္ဘာရင့် ၀ါရင့်ကြီး မန်းလေးပြန်ရောက်ပြီ။ ဒါ့ပုံတွေ စကားပြောကောင်းလွန်းတော့ ဘာမှ ပြန်မပြော တတ်တော့ဘူး လေးပေါက်ရေ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သူတို့မျက်နှာအခံလေးတွေက ကလေးနဲ့ မလိုက်အောင် မာကျောနေသလိုပါဘဲ
ဒါပေမယ့် ဒီလိုကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ပါ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မပြုံးရေ သမ္ဘာမရင့်ပါဘူး ကိုယ်သိတာလေးတွေ ပြန်ရှယ်တဲ့အဆင့်ပါခင်ဗျာ
Ma Ei says: ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပြန်တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်…
တစ်ချို့ ကလေးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ပြုံးလို့ရယ်လို့ပါ
ခုကလေးတွေက မျက်နှာ အနေထား နဲနဲမာတယ် သူတို့ရင်ထဲ မကျေနပ်ချက်တွေရှိနေသလိုဘဲ..
ဒုတိယပုံက သားအမိရဲ့ အပြုံး အပျော်လေးတွေကတော့ ကြည့်သူကိုကူးစက် ပျော်ရွှင်လာတယ်…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မအိရေ
ပုံတွေ စာတွေ ဆက်တိုက်လာမှာပါ အားပေးတာ ကျေးဇူး ပါဘဲ
Comments By Postယဉ်ကျေး Respect လူ့ပညတ် - အတွေးလေး - ဇီဇီမြေပုံထဲမှာ မပါချင်တဲ့လမ်း - ဇီဇီ - Thint Aye Yeikဟောတော့ ... - ဇီဇီ - ၀င့်ပြုံးမြင့်အမေ့မျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပါလို့ . . လိုက်ခဲ့တယ် . . လိုက်ခဲ့တယ် - ဇီဇီ - ၀င့်ပြုံးမြင့်" ဟိုမှာဒီမှာ " - Foreign Resident - Thint Aye Yeikဘာရယ်ဟုတ်ဘူး... - ၀င့်ပြုံးမြင့် - ဂျစ်စူယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - Foreign Resident - Ko chogyiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - ကျော်လွင်ဖြိုး - တောတွင်းပျော်အားနာလွန်းလို့ ပါ - တောတွင်းပျော် - တောတွင်းပျော်အကျဉ်းသား Theory စဉ်းစား ဘယ်လိုချီ - Ko chogyi - Thint Aye Yeik"ေ ကာက်ရိုးမီး" - aye.kk - weiweiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body(0:2) - ko six - ဇီဇီနေ့ ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ အေးချမ်းလတ်ဆတ်မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားရမယ့် ရွှေပြည် - Thint Aye Yeik - ko sixမတူညီသော အတွေးအမြင်များ - ko six - ကျော်လွင်ဖြိုးအဝင်ကော - ko six - Mr. MarGaအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - ko six - kaiသူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - surmi - ဦးကြောင်ကြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Tawwin Pan - Foreign Residentအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Tawwin Pan - Thint Aye Yeikချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - aye.kk - ဇီဇီဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ရေတွေကနိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာကိုစီးဆင်းနေတဲ့နေရာ - Thint Aye Yeik - Mr. MarGaဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်"ပြည့် " - Thint Aye Yeik - aye.kkPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Foreign Resident - Thint Aye Yeikဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် - Mr. MarGa - Mr. MarGaCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10alinsett (95996 Kyats )Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (91703 Kyats )weiwei (83430 Kyats )SP (81016 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59104 Kyats )monmon (58624 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB